» राजेन्द्र पाठक र मिना नेपाल नै हो त विजेता ?
राजेन्द्र पाठक र मिना नेपाल नै हो त विजेता ?
मकवानपुर, २८ असोज । नेपालकै चर्चित दोहोरी रियालिटी शो ‘दोहोरी च्याम्पियन’ को फाईनलमा पुग्ने अन्तिम जोडीको घोषणा यही शनिबार हुँदैछ । गत शनिबार राजेन्द्र पाठक र मिना नेपालसँग बालचन्द्र बराल र शोभा कार्कीले दोहोरी भिडेका थिए । यी दुबै टिमले गत साता कडा दोहोरी भिडन्त गरेका थिए । उनीहरुले दोहोरी भिडन्तका क्रममा दर्शक र निर्णायकहरुबाट प्रशंसा पाएका थिए । गत साता शोमा गायिका मिना नेपालले सर्वाधिक चर्चा पाएकी थिईन् भने गायक राजेन्द्र पाठकले मिश्रित टिप्पणी पाएका थिए ।
मिना र राजेन्द्रलाई धेरै दर्शकहरुले कमेन्टबाटै फाईनलमा पुग्ने जोडी भन्दै प्रशंसा गरेका छन् । तर निर्णायक मत र दर्शक भोटका आधारमा रिजल्ट हुने भएकोले उनीहरु फाईनलमा पुग्लान् भनेर यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । वाईल्ड कार्ड जित्दै अगाडि बढेका कारण पनि यो जोडीले फाईनलमा पाईला टेक्नसक्ने भन्दै धेरै दर्शकहरुले कमेन्ट गरेका छन् । तपाईको विचारमा के मिना र राजेन्द्र दोहोरी च्याम्पियनको फाईनलमा पुग्लान् जस्तो लाग्छ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् ।
दोहोरी च्याम्पियनको उत्कृष्ट ४ मा पुगेका तेस्रो जोडी हुन् राजेन्द्र पाठक र मिना नेपाल । उनीहरुले उत्कृष्ट ८ को दोहोरी भिडन्तमा चर्चित जोडी राजु केसी र डिला बिकसँग दोहोरी भिडेका थिए । यसअघि उत्कृष्ट १६ को दोहोरी भिडन्तमा राजेन्द्रलाई सबै निर्णायकहरुले फो स्टार दिएका थिए भने मिनालाई दुई जना निर्णायकहरुले थ्री स्टार र दुई जना निर्णायकहरुले फो स्टार दिएका थिए । त्यस्तै उत्कृष्ट २४ को दोहोरी भिडन्तमा उनीहरुले निर्णायकहरुबाट जम्मा ५९९ अंक प्राप्त गर्दै ५ अंकले हार व्यहोरेका थिए । तर उनीहरु वाईल्ड कार्डमार्फत पून शोमा प्रवेश गरेका थिए । फिजिकल अडिसनदेखि नै चर्चामा रहेका मिना र राजेन्द्र लाईभ दोहोरीमा चर्चित छन् । उनीहरु चिनिएका गायक तथा गायिका पनि हुन् । मिना ओखलढुङ्गाकी र राजेन्द्र नुवाकोटका हुन् । हेर्नुहोस् भिडियो सामग्री–